Youtube ma Dilbaa TV? | Martech Zone
Youtube ma Dilbaa TV?
Khamiista, Noofembar 3, 2011 Khamiista, Noofembar 3, 2011 Douglas Karr
Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa inaan telefishan yeelan doono intaan noolahay ka dibna qaar. Si ka duwan infographic this, ma aaminsani in telefishanka dhintay ... kaliya waxaan u maleynayaa inuu marayo isbadal. Boqolaal kanaal, imaatinka Tivo iyo xawaare sare, maxaa dhaawici telefishanka ayaa saamayn ku yeeshay xayeysiinta… runti ma ahan Youtube. Iyo infographic-ka hoose wuxuu ka hadlayaa qiimaha saamiga Google, laakiin wuxuu dayacayaa inuu muujiyo in Youtube uusan wax lacag ah samayn, sidoo kale!
Waxa soo qabanaya, dabcan, waa awooda ganacsiyada inay horumariyaan xayeysiinta fiidiyow ee qiimaha jaban. Xayeysiisyada telefishinka waxay ku kici karaan in ka badan $ 60,000 wax soo saar. Mar dambe maahan! Hadda waxaad u isticmaali kartaa kamarad HD taleefankaaga ah iyo softiweer tafatirka bilaashka ah si aad ugu soo saarto xayeysiis qiimahoodu qayb ahaan. Marka advertising xayeysiinta fiidiyowga ayaa qaban doonta.
Marka laga hadlayo Youtube iyo Telefishanka two labaduba way isku milmayaan. GoogleTV, AppleTV iyo kuwa kaleba waxay leeyihiin barnaamijyo Youtube ah. Bixiyeyaasha fiilooyinka sida Comcast ama U-Verse fiidiyoow fiidiyoow ah sida internetka oo kale. Waxaa jira isku duubnaan labada teknolojiyadood oo dhacaya - waana jeclahay!
Infographic waxaa qorey Freemake, oo ah mid horumariya Beddelka Youtube
Tags: televisiontvxayeysiinta fiidiyowgayoutube
Goobaha Moobilka, Barnaamijyada, SMS & QR Codes - Raaxo ama Loo Baahan Yahay?
Ma Infographics xun ayaa baabiinaya Suuqgeyntaada? #BWELA
Nov 4, 2011 saacadu markay tahay 4:08 PM
Xog wanaagsan. Soosaarayaasha ayaa aad ugu duuban duubista. Dadku waxay rabaan inay dadka arkaan.
Nov 4, 2011 saacadu markay tahay 4:17 PM
U fiirsasho weyn, Guji! Waxaan ku raacsanahay in dadka waawayn aysan aad u kicin fiidiyowga dhalaalaya ee dhalaalaya mar dambe people dadka dhabta ah, farriimaha dhabta ahi way guuleystaan ​​sababtoo ah daacadnimadooda iyo kartidooda inay shakhsi ahaan isugu xirmaan.
Mar 12, 2012 at 1: 11 PM
Maqaal aad u xiiso badan mudane! Anigu sidoo kale ma aaminsani in Youtube uu dilayo TV-ga, waxaan u maleynayaa TV-ga inuu isdilayo! Qaar badan oo muujinaya buskudka cookie ayaa muujinaya, xayaysiisyo, jadwallo xun, iyo dhammaan barnaamijyada xunxun ee qiimaha qaaliga ah oo aan si fudud u awoodi karin dhaqaalaha maanta!